Ukufika kweSoftware yePhepha kwiFomstack
Ukuqaliswa kweFomstack yamaphepha okufika
NgoLwesibini, Matshi 29, 2011 NgoMvulo, nge-1 kaJanuwari, 2018 Douglas Karr
Bravo kubahlobo bam abalungileyo kwi IFomstack - ngokoluvo lwam - inkulumbuso umakhi weefom online kubathengisi (ewe, lelo likhonkco lokudibana). Omnye wemisebenzi enzima esinayo nabaxumi bethu xa sisakha isicwangciso sephepha lokufika eneneni sisiseko sokwakha loo maphepha okufika ngaphakathi.
Ayisiyongxaki kwakhona! IFomstack Isandula ukukhupha isisombululo sayo seLanding Page yokwakha amaphepha ajikeleze eyakho IFomstack iifom.
Ukuba wenza ubuchule bokuthengisa ngaphakathi, kubonakala ngathi akukho sixhobo silunge ngakumbi kuneso IFomstack ukwakha nokucwangcisa amaphepha akho okufika. Unako ukukhupha iphulo elinye ngephulo elinye!
tags: iifomuindlela yobumemaphepha
Ngaba oosomashishini bazalwa?
Mar 29, 2011 ngo 10:23 PM
Ngaba amaphepha okumisa amatsha angasebenza kwiPPC? Yeyiphi imida kwi-URL?
Mar 31, 2011 ngo 8:16 PM
UChris kwinto endiyibonileyo kuya kufuneka usebenzise i-url efihliweyo ukuze iphepha libonise ngendlela ongathanda ngayo. Ndiqinisekile ukuba oku kuya kuvela ekuhambeni kwexesha